Dowladda Soomaaliya oo shaacisay Saddex caqabad oo hortaagan dhameystirka Dastuurka - Awdinle Online
Wasiirka Dastuurka XFS Xildhibaan Saalax Axmed Jaamac oo la hadlay Warbaahinta Dowladda ayaa soo bandhigay caqabadaha hortaagan qabyo-tirka Dastuurka KMG ah & kaalinta DFS & Dowlad Goboleedyada.
Saalax ayaa sheegay in Magaalooyin kala duwan oo Xarumo rasmi & KMG u ah Dowlad Goboleedyada in Wasaaraddiisu ay u tagtay soo uruurinta Caqabadaha hortaagan qabyo-tiro Dastuurka & Aragtida laga qabo.
Wasiirka Dastuurka Xukuumadda Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac ayaa Caqabadaha ay gudbi waayeen kusoo koobay saddex arrimood oo haddii aan xalkooda la helin Dastuurka uu qabyo sii ahaanayo:
1- Dadka oo aan faham ka heysan Datuurka Dalka, iyaga oo u heysta buug la iska qoray oo meel la isaga tuurayo marka la dhammeeyo shaqada dib u eegista ah ee lagu sameynayo.
2-Ku dhawaaqista Gooni-goosadka Somaliland oo uu ku tilmaamay in go’aankaas uu si cad uga hor imaaneya qodobada ugu horeeya ee Dastuurka KMG ah oo qeexaya Midnimada Jamhuuriyadda Soomaaliya.
3-Aragtida Diimeed ee dhinaca Dastuurka, qodobkaan waxa uu ku sheegay in dadka aragtidaas qaba in xalkooda laga helo.
Dhanka kale, Wasiirka Dastuurka XFS ayaa Madaxda Dowladda Federaalka & Dowlad Goboleedyada ku dhaliilay in ay ku baratamayaan Doorashada, halkii la rabay in ay diiradda saaraan Qabyo-tirka Dastuurka.
“Qayb waliba oo Soomaalida kamid ah waxa ay rabtaa in Afkaarteeda oo kaliya la meelmariyo, inta aan jirin ka qaybgalka & Wada-xaajoodka dastuurka wuu dhutinayaa qabyona wuu ahaanayaa, wax Wasaarad keliya & Guddi ay xalin karaan ma ahan, Marka ay noqoto Doorasho ayaa la galayaa, Maamul Goboleeyada & Dowladda Federaalka aad bay ugu loolamaan, balse marka la dhaho dastuur baa laga wada shaqeynayaa miiska hoostiisa ayuu nin waliba dhigaayaa” Sidaasi waxaa yiri Wasiirka Dastuurka XFS.
Dowladihii ugu dambeeyay dalka ayaa muddo xileedkooda dhammeystay iyaga oo aan wax sidaas u muuqda ka qaban qabyo-tirka Dastuurka KMG ah oo sal looga dhigo is qab-qabsiga & qodobada qaar oo u baahan in howl adag laga qabto.
Previous articleWasiirka Arrimaha Gudaha & Odayaasha Dhaqanka G/Hiiraan oo heshiis ka gaaray xiisada Beledweyne
Next articleDiyaarado duqeyn ka geystay degaano ka tirsan Gobolka Gedo